Arts & Humanities » ဘ၀………………………	8
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Dec 12, 2015 in Arts & Humanities | 8 comments
သဂျီး ပုံဒွေ လှည့်မရဘူးဗျလုပ်ပါအုန်း
Last Edited by M#2
E.မြောက်မြောက် says: မတင်ခင် တခါထဲ လှည့်ထားဘာ
“ဘီလူးကြီး”ogre says: တစိခါထဲ လှည့်တာတောင် တစောင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နေလို့ ဂုတည့်တွားပြီး
Alinsett @ Maung Thura says: ပုံတွေ ကြည့်သွားပါကြောင်း….
အန်တီဒုံရဲ့ အေးကေ ဆေးဆိုင်မှာ… ဘီလူးကြီး ဆိုတဲ့ နာမည်တပ်ထားတဲ့ ဂဇက်တံဆိပ်ရိုက်
အမှတ်တရ အကျီ င်္တစ်ထည်… သောင်တင်နေပါကြောင်း…..
အဲ့ဒါလေး…. အကြောင်း ညီညွတ်ရင်… ယူငင်စေလိုပါကြောင်း…
“ဘီလူးကြီး”ogre says: ကျေးဇူးတင်ပါ ခင်ဗျ
အလုပ်ထဲမှာေ်ခါင်မဖော်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါသဖြင့်
အကြောင်းညီညွှတ်အောင် ဘောင်းဘီဝတ်ပြီးမှ သွားယူလိုက်ပါမည်ခင်ဗျ
မြစပဲရိုး says: ပြောရရင် အားလုံး က အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရွယ်တွေချည်းပါဘဲ။
အခု မှာတော့ အလုပ်ရှား လို့ လေဘယ် တပ်ထားပါဦးမယ်။
အလုပ်ပေါလာချိန်မှာတော့ သူများ ကို မှီခိုပြီး မှ ထမင်းစားရတဲ့ ဘဝ တွေ ပျောက်သွားမယ် မှန်းပါတယ်။
နိုင်ငံက ပရော့ဂျက်တွေ ကို မှီခိုပြီး တောင်းရမ်းစားနေသူ တွေ ခွက်ပျောက်၊ စားကျက်ပျောက်တော့မှာမို့ ခုနှစ်ထွေ အက တွေ ကို ကြုံသလို က နေကြပါပြီ။
အသက်၇၀ကျော်အထိ.. အလုပ်လုပ်နေတဲ့..အမယ်အိုကိုမှအားမနာ.. တောင်းနေလိုက်ကြတာ…
Mike says: .အလွယ်လမ်းလိုက်သူများလာတာ…သန်သန်စွမ်းစွမ်းဆိုမထည့်ကြနဲ့
“ဘီလူးကြီး”ogre says: မြန်မာပြည်မှာ
“ကျူးးကျော်ပြသနာ”
ဒီနှစ်ခု ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရင် တော်တော်ကောင်းမှာဗျ